Namaste Karnali » राष्ट्र बैंक अर्थमन्त्रालयको शाखा जस्तो भयोः डा. महत राष्ट्र बैंक अर्थमन्त्रालयको शाखा जस्तो भयोः डा. महत – Namaste Karnali
‘कमर्शीयल बैंकलाई नियमन गर्ने हो तर व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप भने राष्ट्र बैंकले गर्नु हुदैन’
पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकायको रुपमा रहेको स्यायत्त संस्था नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थमन्त्रालयको शाखा जस्तो भएको बताएका छन् । राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था भएर पनि यसले आफै निर्णय गर्न नसकेको उनले बताए ।
१ श्रावण २०७७, बिहीबार १०:०७ प्रकाशित